Noho ny fitaka nataon'ny Tim sy Mapar, : Mihamafana ny fitokonan’ireo sendika -
AccueilSongandinaNoho ny fitaka nataon’ny Tim sy Mapar, : Mihamafana ny fitokonan’ireo sendika
Noho ny fitaka nataon’ny Tim sy Mapar, : Mihamafana ny fitokonan’ireo sendika
Miitatra hatrany ny fitakiana ataon’ireo milaza fa mpikatroka sendikaly izay manao fitokonana ankehitriny, na dia efa nisy novaliana aza ny fitakiana nataon’izy ireo dia ny fananganana governemanta vaovao. Sahirana noho izany ity farany amin’ny famahana ny olana hany ka lasa mandray fanapahan-kevitra tsy voalanjalanja araka ny nambaran’ireo mpandinika ny raharaham-pirenena. Tsy mitovy mihitsy mantsy ny famahana olana ho an’ny governemanta teo aloha izay hoe fony mbola tena tao anatin’ny filaminana tanteraka ny fitondrana ankehitriny, sy ny governemanta Ntsay raha ny fahatsapan’ireo mpandinika azy. Toa mampatsiahy ny zava-nitranga nandritra ny fitondranana Tetezamita ny fanapahan-kevitra raisina ankehitriny ka ny baomba mandatsa-dranomaso no ampitenenina. Nifanohitra tanteraka tamin’ny fanapahan-kevitra noraisina fony mbola nitarika fitokonana teny an-kianja ireo depiote Tim sy Mapar.
Tsy tokony hohadinoina anefa fa noho ny fampanantenana poakaty nataon’ireto depiote ireto teny amin’ny kianjan’ny 13 Mai no nahatonga ny fitakiana nihamafy. Rehefa tratra ny tanjona satria azo ny seza, dia nanjavona tsikelikely ireto nampanantena lanitra sy fiovana. Tsy nisalasala ihany koa izy ireo ny namarana ilay nantsoina ho tolona, satria efa tafiditra tanaty governemanta, ary samy efa nilaza fa tratra ny tanjona ka tsy misy tokony hiakarana eny an-kianja intsony. Fanapahan-kevitra izay nandiso fanantenana ireto mpikatroka sendikaly ka nahatonga azy ireo nanamafy ny fitakiany. Valifaty noho ny fitaka nataon’ny Tim sy Mapar azy no mahatonga ireto mpitarika sendika nanapa-kevitra fa hanamafy ny fitokonana, ka zary nila voa tsy ary toa izao. Alahelo toerana ihany koa, satria samy nitolona teny an-kianja izao ihany nefa izy ireo tsy mba natao ho isan’ireo nomena toerana, na dia efa nangataka ny hananganana governemanta teknisiana aza. Raharahan’ny samy teny amin’ny kianjan’ny 13 Mai araka izany no nahatonga izao fitokonana sendikaly izao fa tsy noho ny fahadisoana nataon’ny mpitondra ankehitriny akory.